Ingxoxo yevidiyo yesiNgisi
Ingxoxo yevidiyo yesiNgisi.
Namuhla abantu abaningi bayazi ngamathuba engxoxo yevidiyo yaseRussia. Abantu abaningi bazama ukufinyelela lo mthombo okungenani kanye ngosuku ukuze baxoxe ngokukhululeka nabanye abantu: bakwamanye amadolobha, amazwe nakwamanye amazwekazi. Ingxoxo yevidiyo roulette yaseRussia ilula ngoba wonke umuntu ukhuluma isiRussia ikakhulukazi kule nsiza. Ngaphandle kwalokho, akukho mkhawulo.
Muva nje, ingxoxo yevidiyo ye-roulette yeRussia isiya ngokuya ithandwa kakhulu. Ngakho-ke sekuyisikhathi sokukhuluma ngokuziphatha okuhle engxoxweni yevidiyo Russian roulette. Lo mbuzo ukhathazeka nge-netizens eminingi. Lo mbhalo uzobhekana nezinkinga ezilandelayo:
wukuthi yini isitayela engxoxweni yevidiyo "roulette waseRussia"
kungani udinga ukulandela isithunzi engxoxweni yevidiyo
zokuziphatha okuhle engxoxweni yevidiyo yaseRussia engxoxweni
Imithetho yokuziphatha eyisisekelo ye-
kwi-chat chat roulette
indlela yokuba ngumguquki omuhle ku-chat chat roulette yevidiyo
A manje ake sihambe kafushane kuwo wonke amaphuzu we-etiquette engxoxweni yevidiyo yaseRussia. Ake siqale ngombuzo wokuqala:
Iyini i-etiquette engxoxweni yevidiyo Russian Roulette?
Wonke umuntu uyazi ukuthi i-etiquette umthetho wokuziphatha ezimweni ezithile nasezindaweni ezithile. Kuzoba okufanayo naku-Intanethi. I-Etiquette kwi-Intanethi nasezingxoxweni zevidiyo yimithetho yokuziphatha, kanye nokubukeka, imikhuba, kepha isivele iku-inthanethi. I-etiquette ye-Intanethi ayihlukile kakhulu kusihlonipho esilula. Kepha noma kunjalo kunomehluko. Yilokho esizokhuluma ngakho ngesikhathi sokuxoxwa kwe-etiquette engxoxweni yevidiyo yaseRussia engxoxo. Abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna ukwenza abangane abasha, noma abangane, ku-Intanethi. Izingxoxo zevidiyo zilungele kakhulu kulokhu.
Namuhla, wonke umuntu angaya kunoma iyiphi ingxoxo yevidiyo futhi athole umuntu angakhuluma naye. I-roulette yengxoxo yevidiyo ihlukile engxoxweni elula yevidiyo kwezinye izici:
interlocutor inikezwe ngokungahleliwe ngokuphelele
Ungaphazamisa ingxoxo nganoma yisiphi isikhathi bese uqala ukuxoxa nabanye abantu.
ayidingi ukubhalisa ukuze iqale ukuxoxa
Ungaxoxa nabantu abaningi kuseshini eyodwa.
Yilezi zici eziyalela imithetho yokuziphatha ngesikhathi sokuxhumana ku-video chat roulette. Ikakhulu engxoxweni yevidiyo Russian roulette. Imithetho yokuziphatha ngesikhathi se-inthanethi ilula futhi iyaqondakala kuwo wonke umuntu. Noma kunjalo, kufanelekile ukwazi ngabo nakanjani. Futhi lapho ufunda le mithetho ngokushesha, ukukhululeka ngokwengeziwe futhi kujabulise izingxoxo nabanye abahlukanisi. Izinzuzo eziningi ozoba nazo njengomlamuli.Lokhu kungahle kube yinkomba yokuziphatha okubi. Futhi okuphambene nalokho, uma imithetho yokuziphatha kwinethiwekhi engxoxweni yevidiyo yaseRussia ihlonishwa, khona-ke abangeneleli ngokuzithokozisa baxhumana futhi baphakamisa ukubheka imihlangano eku-inthanethi nawe. Leli iqiniso elilula: uma ubona inhlonipho, khona-ke ukukhulumisana kuzoletha injabulo enkulu ngenqubo uqobo. Futhi umuntu othandwa abanye njenge-interlocutor uzokwazi ukwenza abangane abasha noma abantu obajwayele. Noma vele uxoxe ngokuzijabulisa.
Uma ubona ukuhlonishwa ku-video chat roulette, khona-ke ungathola kalula izinzuzo eziningi ezivela kwabanye abasebenzisi. Futhi futhi kuyenzeka ukuthi uhlunge abantu abangafanelekile bokuxhumana ngesikhathi esifushane. Akuyona imfihlo ukuthi omengameli bahlole izikhalazo futhi bazinqande ngewashi, noma nabantu abalungile abangaziphathanga ngokwemithetho. Uma ungayibheki inkambiso eyemukelwe engosini yevidiyo yokuxoxa, khona-ke bangabhala isikhalazo ngawe futhi kuleli cala kuzoba nethuba eliphezulu lokuvinjwa isikhashana. Uma izikhalazo zemukelwa kaningi, khona-ke ithuba langempela lokuvinjelwa lizovela unomphela.
Lokhu kungaba ngesinye sezizathu eziyinhloko nezimpendulo kumbuzo: kungani ividiyo ye-roulette kufanele ibheke inhlonipho?
Le, yiqiniso, impendulo, kepha hhayi ukuphela kwayo. Ngaphezu kokuvinjelwa okungenzeka, kukhona okunye okungahambi kahle uma isithunzi sihlonishwa. Isibonelo, kungavela isimo lapho umthanda ngokweqiniso umuntu okhuluma naye futhi ungathanda ukuqhubeka nokukhuluma naye, kepha angazi ukuthi ungakwenza kanjani lokhu. Lokhu kuzoba futhi yinto yobuhle. Yonke inhlonipho iyimithetho yokuxhumana. Futhi ukwazi ukwengeza igumbi ngalinye lokuxhumana nakho kungaba yingxenye yokuzihlonipha.
Uma umshumeli enamahloni futhi ethule isikhathi eside, khona-ke naye wephula imithetho yokuziphatha okuhle. Ngemuva kwakho konke, noma yikuphi ukuxhumana kuhilela ukwenza izinto ndawonye. Ngakho-ke, kuzokuxaka uma umuntu ekhuluma ngaso sonke isikhathi, kanti omunye uzohlala ethule.
Kungumkhosi wokuhlonipha owenza ukuthi iRoulette yevidiyo yokuxoxa ijabulise futhi ibe lusizo.
ze-etiquette engxoxweni yevidiyo yaseRussia engxoxo.
Etiquette ingahluka. Ubuningi be-etiquette bungahlukaniswa baba yi:
Ilebula yokwenza i-
Lezi zinhlobo ze-etiquette zingabhekwa njengezibaluleke kakhulu lapho zixhumana nge-video chat Russian roulette. Ake sibheke futhi sihlaziye ngemininingwane ngayinye inhlobo yokuzihlonipha.
Ukuziphatha okuhle kusho ukuthi kufanele ugqoke ngesikhathi sokuxoxa online. Okungenani ukuhlonipha umlamuleli wakhe. Amantombazane nabesifazane akufanele bakhombise amabele angenqunu nezinye izingxenye zomzimba wabo ezizothinta ubulili nganoma iyiphi indlela.
Indoda nayo ingcono ukugqoka.Lokhu kusho ukuthi bobabili abangeneleli kufanele bagqoke ngenkathi bexoxa nge-roulette yaseRussia.
Uma sikhuluma ngobuhle be-makeup, khona-ke yonke into ilula. Uma ugqoka ukwakheka kakhulu, kungasunduza ngokushesha umdluliseli ongaba khona. Noma mhlawumbe ukuheha. Awusoze wazi nakanjani. Ngakho-ke, amantombazane angcono ngokugxila emizweni yabo. Uma ukhululekile ukwakheka okukhanyayo, ungakwenza. Uma ukhululekile ngaphandle kokwenza izimonyo, khona-ke awusoze wakwenza nakancane.
Kepha kusamele ukukhumbule ukuthi "bahlangatshezwa yizingubo, kepha bephelezelwa yingqondo." Imizuzwana yokuqala ibaluleke kakhulu lapho ufuna i-interlocutor. Futhi ngemizuzwana yokuqala uhlolwa ngokunembile ngokubukeka. Ngakho-ke, cabanga kahle ukuthi uzobe ugqoke ini nokuthi uzogqoka kanjani ukwakheka. Futhi ungakhohlwa nge-hairstyle. Okungenani ukuhlanganisa akuphazamisi.
Uma ubona lezi zinhlobo zokuziphatha okuhle: isitayela sokuziphatha, isimilo, ukuxoxa nge-video roulette yezingxoxo ngokuqinisekile kuzothela izithelo: uzothola ama-interlocriers amnandi futhi ukuxhumana kungalibaleki.
Imithetho eyisisekelo yokuxoxa ngevidiyo roulette yaseRussia.
Imiphakathi iya ezingxoxweni zevidiyo ukuze uvele uxoxe futhi uphumule kancane ngemuva komsebenzi wosuku onzima. Engxoxweni efanayo yevidiyo, i-roulette yaseRussia ingahlangana nabantu abavela emazweni ahlukene, amadolobha, isimo sezenhlalo ezahlukene kanye namazinga wemali ahlukene. Konke lokhu ndawonye kukuvumela ukuthi ukhulume ngokukhululeka futhi ngasikhathi sinye ube nemizwa eminingi emnandi.
Kuliqiniso, konke lokhu kungenzeka kuphela ngokuya ngemithetho eqinile yokuziphatha ku-video chat roulette. Imithetho yokuziphatha ifakiwe futhi kwinhlonipho. Ukugcinwa kwabo kuzosho ukuthi ungumuntu oxoxa naye omuhle futhi ohlonipha imizwa yakhe futhi ahloniphane nomuntu axhumana naye kwezokuxhumana.
Futhi manje ake sibheke yonke imithetho yokuxhumana ngokuya ngenhlonipho.
Nayi imithetho eyisisekelo yokuxhumana engxoxweni yevidiyo Russian roulette:
Hlonipha imizwa yomdlwenguli
Zihloniphe wena nemizwa yakho.
khetha i-interlocutor yezintshisakalo
iyeka ukuxhumana okungadingekile futhi okuyingozi
Le yimithetho, uma iveziwe ngolimi lwenhlonipho. Manje ake sibheke imithetho efanayo ngokwemibandela yengxoxo yevidiyo yaseRussia. Yilokho abakushoyo:
Awukwazi ukuba mbi futhi usebenzise amazwi okufunga
awukwazi ukuthuka umuntu nganoma yisiphi isizathu: ubulili, ubudala, umbala wesikhumba, izinkolelo zenkolo, ukubukwa kwezepolitiki.
awukwazi ukusebenzisa ucansi ukuxhumana
awukwazi ukuvela ngohlaka unqunu
Awukwazi ukukhombisa ezinye izinto esikhundleni sakho kanye nobuso bakho.
Le yimithetho eyisisekelo. Uma zibhekwe ngokuqinile, ukuxhumana, ngiphinda futhi, kuzoletha imiphumela emihle.Abomengameli be-chat roulette bevidiyo yaseRussia bachitha usuku nobusuku, behlela izikhalazo. Futhi kuvame kakhulu ukuthi lezo zivakashi zengevu ezingxoxo zeRussia ezithi vidiyo ezephula okungenani eyodwa yemithetho zivinjelwe. Kuyiqiniso, azivimbi unomphela, kodwa okwesikhashana esithile. Kepha uma okungalungile kukhulu noma kubi kakhulu, khona-ke bangavinjwa unomphela. Lokhu kuzosho ukuthi ungalahlekelwa ithuba lokuxoxa nge-roulette yaseRussia ngobuwula bakho.
Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukulandela imithetho yezokuxhumana engxoxweni yevidiyo yaseRussia engxoxo.
Uma lesi kungokokuqala ngqa ukuxoxa ngeRoulette yaseRussia, ungaqala ingxoxo engasho lutho ngakho konke okusemhlabeni.
Abanye abavakashi kunzima kakhulu ukuzulazula kule ndawo. Abantu abanjalo bavame ukulahleka futhi abazi ukuthi bangaqhubeka kanjani nengxoxo, uma ngabe umuntu othumelayo ethule futhi engenzi imizamo yokuqhubeka nengxoxo.
Kunezindlela ezimbili ongazenza lapha:
Wena njengomdluliseli osebenzayo ubuza imibuzo eholayo noma uhlongoza isihloko ukuze kuxoxwe ngaso.
uvele ucishe lo muntu bese ubheka omunye
Ngenhlanhla, engxoxweni yevidiyo roulette yaseRussia kunezindlela eziyinkulungwane neyodwa zokucinga nge-interlocutor entsha. Ngokuyisisekelo, isayithi lixoxa nge-roulette yaseRussia futhi lisuselwa ekufuneni okungahleliwe komlingani wokuxhumana
Ungaba kanjani i-Roulette Interlocutor yevidiyo epholile.
Many, abasebenzisi abaningi be-Russian roulette chat chat babuza lo mbuzo. Impela, emaphusheni cishe wonke umuntu uzibona ephumelela. Ukuphumelela engxoxweni yevidiyo, kusho insizwa enobungane, esebenzayo, nokuzethemba. Kepha kufanele wenzeni uma ungakhululekile kangako emphakathini futhi ungavikelekile ngokuphelele?
Izenzo ezilandelayo zingasiza:
Cabanga ngaphambi kokukhuluma ngento ozoxoxa ngayo nomunye umuntu.
Cabanga ngokuthi ungaqala kanjani ingxoxo. Okujwayelekile kakhulu ukuthi "Sawubona! Unjani?" Futhi ungacabangi ukuthi lesi yisisho esinqotshwe emakhulwini eminyaka. Lutho neze. Uma usho ngenhlonipho futhi une-
expression ebusweni obhekene nalesiisho, khona-ke ama-85% engxoxo azoqhubeka.
gqoka ngendlela othanda ngayo. Lokhu akusho ukuthi ungafaka amabhulukwe akho ungazihluphi ngenye indlela. I-torso engenamuntu ingenziwa yiphutha ngabaningi ngokuthile okuvusa inkanuko futhi bangaqali ngisho nengxoxo. Kepha i-T-shirt ne-jean kuzovele kubangele uzwela futhi kuzoba nethuba lokuqhubeka nengxoxo. Yebo, isudi eliqinile engxoxweni yevidiyo alisebenzi.
ingcono ukuhlanganisa izinwele zakho. Ngubani ofuna ukukhuluma nomuntu we-shaggy?
. Ukumamatheka, kepha ungahleki. Ngaphandle kwalokho, bangacabanga ukuthi uhlekisa umuntu okhuluma naye. Futhi lokhu kungadala isifiso sokuchofoza inkinobho "elandelayo".
Futhi ngokuvamile, khumbula ukuthi yonke into engxoxweni yevidiyo ingabantu abajwayelekile, ngezindaba zabo kanye nemibono. Futhi abantu abaningi bazokuxhumana okokuqala ngqa.Kungakufanelekela ngisho nokuvuma ukuthi ulapha okokuqala.
Masibuye sikhumbule okufanele sikugweme ngenkathi sixoxa nge-roulette yaseRussia:
kuzwakala ukukhala okukhulu
I-97,007Izihloko ezifuna ingxoxo
Izitho zomzimba ezingama-97,007
ukubukeka kufreyimu esikhundleni sobuso bezinye izinto
Futhi masikhumbule ukuthi yini okufanele ibe sezinhlelweni zokuxhumana nge-video chat Russian roulette:
I-97,007 imizwelo eyakhayo
Imvume Mutual yokuqhubeka nengxoxo
Uma kwenzeka kungazelelwe ukuthi uye engxoxweni yevidiyo ye-roulette yaseRussia, kepha washintshwa kaningi ngokulandelana, ungapheli amandla. Kungenzeka ukuthi abantu bafuna abanye abantu abangakhuluma nabo. Ungalahleki futhi uqhubeke nokufuna umsizi wakho. Esikhathini esingaphansi kwemizuzu emihlanu, uzotholakala. Futhi kuzoqala ingxoxo emnandi futhi emnandi.